Ny fisaraham-panambadiana, rosiana style - Rosia Mihoatra ny
Araka ny antontan’isa, isaky ny fahatelo ao amin’ny fanambadiana ao Rosia mifarana amin’ny fisaraham-panambadiana amin’ny telo taona voalohany. Loharano: Sary an-gazety, Rehefa Valery Leeching ny lehibeny nahazo ny selam-pitatitra iray be loatra ny fotoana, dia totohondry azy ao amin’ny maso. Leeching voaroaka, saingy izy dia nahatsapa ho toy ny mahery fo -izany andro izany. Ny tena vokatry ny zavatra niseho taty aoriana. Valery nanomboka mitady asa, fa raha ampiharina ho an’ny asa, ny mpampiasa mety te-andinin-tsoratra masina. Ary rehefa niantso ny toerana teo aloha ny asa, Leeching ny lehibeny teo aloha nilaza fa izy dia manjary mpiasa. Leeching ny vadiny, Irina, dia niangavy azy mba hiala tsiny ny taloha lehibeny sy mangataka ny asany indray.»Alohan’ny ny faharoa vavy dia lasa enim-bolana monja, ny fianakaviana nila vola»Irina ny nolazainy.
Irina dia ny fiterahana, toy izany koa ny fianakaviany dia nanapa-kevitra mba nandriatra ny trano sy nifindra tao amin’ny Irina ny reniny, Nina.
Nina efa tsy tia Valery
Dia nieritreritra foana ny zanany vavy nanao ny fahadisoana lehibe ny hanambady azy, sy ny fianakaviana ny zava-misy ankehitriny dia toa manaporofo ny marina. Tratra eo ny vadiny sy ny reniny, Irina nanome Valery nandrahonana: izy no tsy miteny ho azy izy mandra-vita ny fandriampahalemana niaraka tamin’ny lehibeny. Ny fanapahan-kevitra dia loza ho an’ny fianakaviany mbola misy ankizy kely. Valery nanomboka zava-pisotro, ary dia nanosika Irina manodidina. Farany Nina niditra an-tsehatra sy nanipy Valery avy ny trano.
Irina fitoriana ny fisaraham-panambadiana
Antontan’isa avy ao Rosia ara-tsosialy firaketana birao mampiseho fa tena nifarana tamin’ny fisaraham-panambadiana. Folo taona lasa izay, ny ampahatelon’ny rosiana fanambadiana niafara tamin’ny fisaraham-panambadiana amin’izao fotoana izao dia isaky ny faharoa. Tamin’ny taona, ny momba ny, nisara-panambadiana ny mpivady raha, nanambady. Rosia nanana ny avo indrindra ny tahan’ny fisaraham-panambadiana any amin’izao tontolo izao tamin’ny taona, araka ny filazan’ny Firenena Mikambana. Sociologists milaza fa ny tena mahatonga ny ravana ny fanambadiana dia ny fisotroan-toaka, ny fahasahiranana ara-bola sy feno olona ny toe-piainana — ary amin’ny toe-javatra maro, telo.»Ao ny mahazatra rosiana trano, dia misy olona maro kokoa noho ny efi-trano. Maro ireo efa zokinjokiny ny mpivady mbola velona ny ray aman-dreny noho izy ireo na aiza na aiza-kafa miaina»hoy i Alexander Sitelink, Profesora Mpiara-miasa ny Fianakaviana Sosiolojia ao amin’ny anjerimanontolom-Panjakana ao Maosko. Ny olona ny tenany, na izany aza, milaza amin’ny fomba hafa. Araka ny fanadihadiana noho ny Rehetra-rosiana ny Hevi-Bahoaka Research Center (Visio) natao tamin’ny tanàn-dehibe manerana an’i Rosia, afa-tsy telo isan-jato ny olona nilaza fa tery ny trano fonenana ny toe-piainana ny zava-dehibe ny fisaraham-panambadiana. Fangalana tonga voalohany, miaraka amin’ny efatra amby roa-polo isan-jato namaly ka niantso ny faharavan’i ny fanambadiana ny fanitsakitsaham-bady, nanaraka ny fahantrana (isan-jato) sy ny tsy fahafahany ny marimaritra iraisana (isan-jato). Araka ny antontan’isa, isaky ny fahatelo ao amin’ny fanambadiana ao Rosia mifarana amin’ny fisaraham-panambadiana ao amin’ny telo taona voalohany. Olona dimy amby telo-polo sy eo ambany noho ny isan-jato avo indrindra ny fisaraham-panambadiana. Fa misy hafa koa, olona maro manan-danja izay mahazo nisara-panambadiana rehefa avy niara-niaina nandritra ny dimy amby roa-polo na telo-polo taona. Indray mandeha ny ankizy efa lehibe, dia jereo ny tsy misy hevitra amin’ny fanohizana ny ho mpivady.»Rehefa ankizy mihalehibe, ray aman-dreny very ny fahita an-tsaha ny asa»hoy Kirill Khomok, Lohany ny sampanan-dalana Ara-Tsaina Foibe.»Toa izany ny fiafaran’ ny mpiray tetikasa ny tanjona efa tratra, ary izy ireo tsy hahita ireo vaovao. Misy ny mpivady izay afaka ny toetrandro isan-karazany ny oram-baratra izy ireo satria mbola tia ny hafa ny orinasa. Saingy tena matetika, ny zanaka no hany zavatra izay hitandrina ny olon-droa miaraka»Araka sociologists, ny lehibe indrindra mampanahy ho an’ny divorcing vehivavy ao Rosia, toy ny ao amin’ny firenena maro hafa dia ara-bola ny fahamarinan-toerana sy ny akanin-jaza. Na dia izany aza, maro ny vehivavy nisara-panambadiana ankafizo ny vaovao amin’ny andraikitra maha-mpamelona. Rosiana ny vehivavy tsy mitady maika ho fanambadiana indray. Ny lehilahy ao amin’ny fisaraham-panambadiana dia miahiahy kokoa ny momba ny fahaverezan ny faritra — dia na ara-bakiteny sy ara-panoharana. Ao ny ara-tsaina anefa, dia tsy afaka ny hametraka ny fitsipika manokana ao amin’ny toerana izay misy ny zanany ho velona. Ary ao ny fahatsapana ara-batana, izy dia voatery nifindra avy ny hafa toerana velona. Vokatr’izany, maro amin’ny rosiana lehilahy mametra ny sehatry ny andraikitra — by mampihetsi-po indray eo amin’ny ray aman-dreniny. Izany ihany koa ny tsy mahazatra ho an’ny Lehilahy rosiana mba hanambady indray haingana.»Maro no efa nisara-panambadiana ny olona ambanin-javatra ny andraikitra toy ny fanabeazana ny ankizy na ny ara-bola ny andraikitra»hoy Kristofer Sodder, profesora mpiara-miasa amin’ny Sekoly Ambony momba ny Toekarena Nasionaly Fikarohana eny amin’ny Anjerimanontolo. Na izany na tsy ny fisaraham-panambadiana, ny ankizy no lasibatra. Araka ny fisaraham-panambadiana, dia matetika miaina amin’ny ny reny sy ny fotoana, ny fifandraisana amin’ny ray deteriorates. Araka ny fitsapan-kevitra amin’ny Rehetra-Rosia ny Hevi-Bahoaka Research Center (Visio), ao anatin’ny dimy taona ny fisaraham-panambadiana. percent ny ray mahita ireo zanany matetika. Eo — taona aorian’ny fisaraham-panambadiana, ny olo-malaza nilatsaka ny. sivy isan-jato, ary rehefa afaka folo taona, dia nilatsaka indray -.
Ny isan-jaton’ny nisara-panambadiana ny ray izay milaza fa izy ireo tsy hahita ireo zanany miakatra avy. roa isan-jato voalohany ny dimy taona ka hatramin’ny. roa isan-jato after taona.»Amin’ ny lalàna, ny ray manana zo mitovy mba hitaiza ireo zanany mihitsy aza raha ny didim-pitsarana fa ny zaza dia tsy maintsy velona ny na ny reniny»hoy Artem Zaimets, mpisolovava manokana amin’ny fianakaviana lalàna. Saingy araka ny antontanisa, fito ambin’ny folo isan-jato ny ray tsy hanararaotra izany fahafahana amin’ny rehetra, ny fanekena tsy nahita ny zanany rehefa afaka ny fisaraham-panambadiana. Eo amin’ny hafa tafahoatra no vitsy ny raim-pianakaviana izay an-keriny ny zanany avy ny taloha-ny vady, izay tsy heloka bevava ny lalàna rosiana.»Ao fitopolo isan-jato ny toe-javatra, taloha vady ho zava-mangidy fahavalo»dia hoy Kirill Khomok.»Efa foana, ny fisaraham-panambadiana dia raisina ho toy ny ara-tsaina ny ratram-po amin’ny le miaraka amin’ny fahafatesan’ny olon-tiana iray»Nefa na dia eo aza ny zava-vokatry ny fisaraham-panambadiana, mpitsabo rarin-tsaina foana fa, ho an’ireo izay mandray izay an-dalana, ny fisaraham-panambadiana dia tsy misy loza, fa vintana iray ho an’ny fitomboana. Ary toa hita fa bebe kokoa ny rosiana mpivady no niorina ny asa mikasika izany fomba fisainana, tia kokoa ny miara-miaina tsy»sambatra mandrakizay izy rehefa»fa fotsiny nandritra ny fotoana fohy
Rosia - Zo Sivily